पेनकिलरले गर्छ भित्री अंगलाई नष्ट ! – Janamanch.com
पेनकिलरले गर्छ भित्री अंगलाई नष्ट !
शारीरिक दुखाई, असजिलोबाट छुटकारा पाउनका लागि हामी थरीथरीका औषधी चपाउँछौं । औषधीको प्रभावले त्यस्ता दुखाई ठिक पनि हुन्छ । वास्तवमा हामी जे जति औषधी सेवन गर्छौं, त्यसको असर शरीरलाई हुन्छ नै । लगभग हरेक रसायन मिश्रति औषधी शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ । त्यसैले अहिले धेरैजसो औषधी सेवन गर्नबाट सकेसम्म बच्ने गर्छन् । सानोतिनो दुखाई, पीडामा औषधी चपाइहाल्ने गर्दैनन् ।जबकी हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने, टाउको दुख्नसाथ औषधी खाइहाल्ने । रुँघा लाग्नसाथ औषधी खाइहाल्ने । जिउ दुख्नसाथ औषधी खाइहाल्ने । यसरी खाइने औषधीले शरीरलाई भने क्रमस नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । त्यसैले त कतिपयले प्राकृतिक उपचार पद्धती अपनाउँछन् । कतिपयले आयुर्बेदिक औषधी सेवन गर्छन् । भनिन्छ, यस्ता उपचार विधी एवं औषधीको शरीरका कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन ।
खासगरी शरीरको दुखाई कम गर्न हामी पेन किलर सेवन गर्छौं । पेन किलर शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ । यदि कसैलाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइ कोलेस्टोर वा मिर्गौंलाको समस्या छ भने त्यस्तो अवस्थामा पेन किलर थप हानिकारक हुनसक्छ । अझ प्रवृत्ति कतिसम्म खराब छ भने, यस्ता पेनकिलर चिकित्सकको परामर्श बिना नै लिने गरिन्छ । सामान्य टाउको दुखेको बेला होस् वा कुनै घाउ दुखेको बेला । जबकी पेन किलरले अन्तत जटिल समस्या पैदा गर्न सक्ने खतरा रहन्छ ।